Kuze kube manje, kungeminye yemisebenzi ebalulekile ngempela kwezokwelapha kuyinto Pulmonologist. Lokho liphatha uchwepheshe, ambalwa azi. Futhi lokhu naphezu kweqiniso lokuthi ulwazi ngqo ngakho ubelokhu igama kulo mkhakha, ingxenye yokuqala okusho "lula." Iqiniso ukuthi Pulmonologist wahlanganyela zezifo umgudu wokuphefumula, kodwa ngokuyinhloko emaphashini ngokwabo. Ngenxa izindlela nocwaningo lwanamuhla futhi tooling eziyinkimbinkimbi nekhono ubuciko ngokuvamile kungenzeka impumelelo ekusizeni ngisho iziguli olusindayo.
Njengoba kuphawuliwe ngaphambili, udokotela we umsebenzi nobunzima isifo esithinta umgudu wokuphefumula. Kufanele kuqashelwe ukuthi pulmonologists ezimweni eziningi ukusebenza tubbolnitsah. izibhedlela okunjalo futhi ngokuvamile ahlanganisa yamaphaphu-TB izindlu. Ngokwemvelo, udokotela ehlola okukhethekile ukusebenza engxenyeni yokuqala. Lokhu akushintshi ukuthi yokuthi pulmonologists eziningi kwakhe kwakuhilela okungaphezu neSifo Sofuba, ekubeni ochwepheshe iphrofayela ngokwanele ezibanzi.
Izifo ezifana nenyumoniya, degree ezinzima, ukwenza ncamashi Pulmonologist. Lokho ephatha lesi sifo kungcono izifo ezithathelwanayo, akudingekile ukuthi, kuhlomisa odokotela yalesi okukhethekile yakhelwe ngokunembile ukuze ulwe nezifo ezifana. Ukukhethwa okubanzi ngemithi yanamuhla elwa namagciwane kungaba Pulmonologist ikhambi ngisho ezahlukeneyo olunzima i-pneumonia.
Ngaphezu kwalokho, iziguli eziningi zama nje uthole nalo kuchwepheshe ezinjalo, ngokudlula esigabeni sinenkonzo yokunakekela iziguli emakhaya yocwaningo. Kuze kube manje, Pulmonologist kokubonisana ingatholakala isiguli ngasinye ngamanani aphansi. inqubo enjalo kuzoveza ngempela isifo esiyingozi namanje ngendlela efanele usaqala. Ngenxa yezindlela zesimanje uphethwe ngokuvamile kungenzeka ukuba amise ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe ekuthuthukiseni ekuqaleni kwenqubo sokugembula.
Ukuba yinkimbinkimbi mkhakha
Omunye wemisebenzi enzima kakhulu imithi nje Pulmonologist. Lokho liphatha izifo esindayo Uchwepheshe ezithathelwanayo, abaningi abawazi, kodwa hhayi wonke umuntu uyazi ukuthi iyingozi kangakanani udokotela kakhulu. I Ochwepheshe wale phrofayela ngokuvamile ngokwabo elinegciwane. Futhi qaphela ukuthi ngokuvamile ukutheleleka esibhedlela kuyingozi ukwedlula abanye, ngoba ukumelana nemithi, futhi Ezingalapheki ngakho.
Ngisho ngaphezulu inselele iyona ubungcweti Pulmonology ezingane. Iqiniso ukuthi uphoqelekile ukuba aphathe iziguli kulencane. Amasosha omzimba kuzo buthaka kakhulu kunezinye abadala. Yonke enye into kufanele kuphawulwe ukuthi kungenzeka izingane ezithathwe akubona bonke antibiotic. Ngenxa yalokho of onguchwepheshe enjalo kuyadingeka ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze unike yokwelapha okunengqondo-antibiotic endaweni Ukukhetha elilinganiselwe imithi ngisho seziguli ezisencane kakhulu.